पत्रपत्रिकामा प्रदेश : आफु अनुकूललाई नियुक्ति गर्दै उपकुलपति
विराटनगर २० भदौ । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेबारी पाएपछि शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. गुरुप्रसाद खनालले विभिन्न समिति र विभागमा नियुक्ति गर्दे पुरानालाई हटाउन थालेका छन् ।
ब्लाष्ट टाइम्समा छापिएको खबरमा उनले नियुक्त गरेका व्यक्तिहरु अख्तियारको निगरानीमा रहेका पूर्व उपकुलपति बलभद्र प्रसाद (बीपी) दाससँग नजिक रहेर काम गरेकाहरु छन् । यो आर्थिक वर्षको आधा परिक्षा सञ्चालन गरिसकेका परिक्षा समितिका सदस्यहरुमध्ये डा. अशोक ऐयर, डा. प्रभातरञ्जन पोखरेल, डा.शमशेर श्रेष्ठ, डा. नारायण कुशवाहलाई निकाले । उनीहरुको स्थानमा डाक्टर खनालले डा. दिलिप ठाकुर, डा. आषिश श्रेष्ठ, डा.यम, डा. अनुप घिमिरेलाई समितिको सदस्यमा नियुक्त गरेका छन् । बिग्रिएका महँगा उपकरण र बिरामीको चाप व्यवस्थापनमा भने खनालले चासो नदिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
बहानाले काम ढिलाई शिर्षकमा नागरिक पूर्वेलीमा खबर छ । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बहानाबाजी गर्दै काममा ढिलाई नगर्न ठेकेदार कम्पनी र सरोकारवाला निकायहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । बिहिबार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आयोजित छलफलमा ६ लेन सडकको काममा ढिलाई भएको भन्दै मुख्यमन्त्री राईले बहाना बनाएर काममा ढिलाई नगर्न निर्देशन दिएका हुन् । विराटनगर (रानी)धरान ६ लेन सडक निर्माणमा प्रदेश सरकारले चासो राखेर दुई पटक बैठक राखेर कामको गति बढाउन आग्रह गरेपनि सन्तोषजनक काम नभएपछि मुख्यमन्त्री राईले ढिलाई नगर्न निर्देशन दिए ।
प्राकृतिक श्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिका सभापति सर्वध्वज साँवाले सडक निर्माणमा ढिलाई हुदाँ जिउधनको क्षति भएको भन्दै काममा हेलचेक्राई नगर्न आग्रह गरे । यही समाचारलाई उद्घोष दैनिकले मुख्य समाचार बनाएर छापेको छ । जनविद्रोह दैनिकमा प्रदेश सवारी तथा यातायात विधेयक दुर्घटना गराई ज्यान मारेमा जन्मकैद शिर्षकमा मुख्य समाचार छ ।
सवारीसम्बन्धी कसुर र त्यसमा हुने दण्ड सजायका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न र दस्तुर असुली सम्बन्धी अधिकांस प्रावधान हटाउन प्रदेश सभा सदस्यहरुले आग्रह गरेका छन् । प्रदेश सवारी तथा यातायातका सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०७६ माथि प्रदेश सभामा बिहीबार भएको छलफलमा प्रदेश सभा सदस्यहरुले सवारी सम्बन्धी धेरै कसुर हुने तर समग्रमा दण्ड सजायको व्यवस्था हुँदा समस्या पर्नेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे ।